गौरवशाली एनसीसी बनाउने प्रतिवद्धताका साथ म यसपटक अध्यक्षको प्रत्यासी:-रविना थापा - USNEPALNEWS.COM
गौरवशाली एनसीसी बनाउने प्रतिवद्धताका साथ म यसपटक अध्यक्षको प्रत्यासी:-रविना थापा
पूर्व अध्यक्ष: बाल्टिमोर एशोसियसन अफ नेप्लिज इन अमेरिका |- यस बाहेक पशुपति बुद्धमन्दिर, एशोसियसन अफ नेप्लिज इन अमेरिका (एएनए) लगायतका संघ,संस्थाको विभिन्न सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्दै काम गरेकी छु |
यो संस्थाको कुनै पनि स्तरको नेतृत्वमा बस्नु या जिम्मेवारी लिनुलाई सबैले गौरवको रुपमा लिनेछन्। संसारका नेपालीहरुले हामी अमेरिकी एनआरएनहरुबाट धेरै कुराहरु साझेदारी र सिक्ने, सिकाउने बातावरण हुनेछ। तपाइहरुलाई अमेरिकी एनआरएन हुँ भन्दा गर्वले छाती फुल्ने अवस्थाको प्रत्याभूति हुनेछ।
. मेरो कार्यकालमा गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तऱराष्ट्रिय समन्वय परिषदसँग सतप्रतिशत रुपमा मापदण्डहरु पुरा गरेको एनसीसी हुनेछ। कामको मूल्यांकनका आधारमा सबैको उच्च सम्मान हुनेछ।
मेरो कार्यकालमा अमेरिकामा नेपाली समुदायहरुको लागि संचालन गरिने र मातृभूमी नेपालमा गरिने प्रोजेक्टहरु गरि दुइखाले प्रोजेक्टहरु संचालन गरिनेछ । कतिपय प्रोजेक्टहरु चाँही आवश्यकता अनुसार नयाँ पनि हुन सक्नेछन्। तर सम्पूर्ण प्रोजेक्टहरु मध्ये ७५-८० प्रतिशत चाँही अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदायको हितमा संचालन गरिनेछ। नेपालमा गरिने केही प्रोजेक्टहरु बाहेक सम्पुर्ण योगदान आइसीसीका प्रोजेक्टहरुलाई नै सहयोग पुग्ने गरी गरिनेछ । आइसीसीको तिनै प्रोजेक्टहरुमा सहभागी हुनु एनसीसीहरुको कर्तब्य हो भन्ने कुरा मैले बुझेकी छु र मेरो कार्यकालमा त्यसै गरिनेछ।
हप्तामा ५ देखि ६ दिनसम्म, दैनिक ८ घण्टा खोल्ने कार्यालय हुनेछ। कार्यालय संचालन गर्न एकजना म्यानेजर हुनेछन। श्रोत बिकास गर्न एकजना श्रोतबिकास गर्ने विशिष्ट व्यक्तिलाई सेवा दिन अनुरोध गरिनेछ।
. कोषाध्यक्षको नेतृत्वमा अमेरिकी कानुन अनुसार बुककिपिंग कम्पनीलाई संस्थाको आर्थिक हर हिसाब अध्यावधिक गरिने ब्यबस्था गरिनेछ।च्याप्टरहरुको लेखा संस्थाको बिधान अनुसार संचालन गरिनेछ। च्याप्टरहरुको अडिट दुइखाले हुनेछ, प्रोग्राम अडिट र लेखा अडिट। च्याप्टर होस् या केन्द्र सम्पूर्ण भुक्तानी प्रक्रिया चेकबाट हुनेछ। कार्यक्रमहरुको आम्दानीलाई केन्द्र या च्याप्टरको खातामा जम्मा गरेपछि मात्र खर्च गर्न मिल्ने कुरालाई कडाइका साथ लागु गरिनेछ। यसबाट हरेक सदस्यहरुको योगदान सही ठाउँमा खर्च भएको हुनेछ।
प्रचण्डलाई योगेश भट्टराईको व्यंग्य:“फड्को हान्दा बीचैमा खसेर बेहाल हुनुहोला”
आज रातीदेखी पानी धेरै पर्न सक्ने